14 / 05 / 2021 03 / 06 / 2021 ရော့ Paton 675 Views စာ0မှတ်ချက် ၇၅၉၀၉ McLaren P75909, ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko, Bugatti, Bugatti Chiron စူပါအားကစား, Koenigsegg, Koenigsegg Jesko, Lego, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego Speed Champions, McLaren, reviews
Koenigsegg အားကစားကားတစ်စီးလာတာကြာပြီ Lego Speed Champions - အဲဒီလိုပဲ ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko စောင့်ရကျိုးနပ်လား
ဆွီဒင်မော်တော်ယာဉ်ကုမ္ပဏီ Koenigsegg သည်လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်က၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောကားများနှင့်မြန်နှုန်းမြင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအောင်မြင်စွာရှာဖွေနိုင်ခြင်းအတွက်လွန်ခဲ့သော ၂၅ နှစ်တာကာလအတွင်းနာမည်ကျော်ကြားခဲ့ပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်များမှထုတ်လုပ်ခဲ့သော Regera, မကြာသေးမီကထုတ်လုပ်ခဲ့သောမော်ဒယ်လေးခုထက်နည်းသောမှတ်တမ်းများကိုသာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ Jesko ။
McLaren နှင့် Bugatti တို့ကဲ့သို့ကမ္ဘာ့စံချိန်များနှင့်ယှဉ်လျှင်အမြန်ဆုံးကားနှင့်အမြန်ဆုံး ၃၀၀ နှင့် ၄၀၀ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့်တစ်နာရီလျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်သည့်ကားများကဲ့သို့ကမ္ဘာ့စံချိန်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်လျှင် ၆ နှစ်တာကာလအတွင်းအံ့အားသင့်ခဲ့ရသည်။ Speed Champions ပထမတစ်ခုဖန်တီးရန် Lego Koenigsegg ။
theme: Lego Speed Champions အမည်သတ်မှတ်မည် - ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko ဖြန့်ချိ: ဇြန္လ 1, 2021
စျေးနှုန်း: £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 အပိုင်းပိုင်း: 280 အသေးစားပုံများ: 1
များအတွက်ရွေးချယ်ထားသော Koenigsegg Lego ကုသမှု 2021 ရဲ့ Jesko တစ် ဦး ဖြစ်သည် လွှတ်ပေးရန်တက်လာမယ့်ကားများအရေအတွက် Koenigsegg Regera ၏ဝတ်လုံကိုကမ္ဘာပေါ်တွင်အင်အားအရှိဆုံးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကမ္ဘာ့အလျင်မြန်ဆုံးခေါင်းစဉ်အဖြစ်အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေသည်။
Bugatti က ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်နှောင်းပိုင်းတွင်၎င်း၏ Chiron Super Sport သည်ထုတ်လုပ်သည့်ကားအတွက် Koenigsegg Agera RS ၏အမြန်နှုန်းစံချိန်ထက်ကျော်လွန်ပြီး ၃၀၀၄.၇၇ မိုင်နှုန်းဖြင့်မောင်းနှင်နိုင်ခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်မှုအနေဖြင့် Koenigsegg က Jesko Absolut၊artJesko ၏ icular ဗားရှင်းပင်ပိုမိုမြန်ဆန်စေရန်ရည်ရွယ်သည် 310mph ၏အမြန်နှုန်းကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့ပြောသလိုပဲ၊ Koenigsegg ကို Koenigsegg ကိုတွေ့ဖို့လာတာကြာပြီ Lego Speed Champions အကွာအဝေး…
အဆိုပါချောင်းမြောင်းကတန်ဖိုးရှိခဲ့ပြီး partကျွန်တော်တစ် ဦး ကြည့်ရှုနိုင်အောင် icularly ဒါ Lego Koenigsegg သည်ရှစ်လုံးပါသောအဆင့်အထိပြုလုပ်ထားသောပုံစံကိုမိတ်ဆက်ခဲ့သည် Speed Champions ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကိုယ်ထည်သို့ပြောင်းလဲလိုက်သောကြောင့်ထိုဒီဇိုင်းမှထုတ်လုပ်ခဲ့သောမော်ဒယ်များအတွက်ဒီဇိုင်းဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အလွန်တိကျမှုတို့ကိုဖွင့်ပေးခဲ့သည်။ Jesko ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသောကားတစ်စီးအတွက်၎င်းသည်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်အချက်မှာသံသယဖြစ်စရာမလို။ ၏အပြင်းထန်ဆုံးရှုထောင့် ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko.
သူများသည်အဓိကအားဖြင့်နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရှိသည် Lego မော်ဒယ်ဘယ်မှာ ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko တကယ်စစ်မှန်သောနှင့်အတူသီဆိုcity အမှန်အတိုင်းပြောရရင်သေတ္တာဘူး art အရမ်းအပြင်းထန်ဆုံးအာရုံစိုက်နှင့်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်။ ယာဉ်၏ရှေ့အဆုံးသည်ကျွမ်းကျင်စွာသဘောပေါက်ထားသည့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောရှေ့ပိုင်းခွဲစက်ကိုကျော်။ ရှေ့သို့ရွေ့သွားသည် Lego ထုံးအစိမ်းရောင် cleaver အပိုင်းအစ၏အသုံးပြုမှုကိုကျေးဇူးတင်ပုံစံ။ ၎င်းသည်မမျှော်လင့်သောဒီဇိုင်းဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းကိုတန်းစီရန်အလွန်အရေးကြီးသည် Lego ကားရဲ့beingရိယာဖြစ်ခြင်းအဘို့သင်၏မျက်စိနီးပါးအမြဲတမ်းပထမ ဦး ဆုံးဆွဲဆောင်လိမ့်မည်များအတွက်တတ်နိုင်သမျှအရင်းအမြစ်ပစ္စည်းအဖြစ်နီးကပ်စွာမော်ဒယ်။
အကြောင်းမှာ၎င်းသည်အမြဲတမ်းနီးပါးဖြစ်သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကျန်ကျန်အပိုင်းများသည်နောက်ဘက်တောင်ပံမှနောက်ဘက်ကို ဖြတ်၍ ထွက်လာသည့်ကြီးမားသောနောက်ဘက်တောင်ပံကိုအာရုံစိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။artတစ်ခုချင်းစီကိုအဆုံးအပေါ် icularly -shaped winglets ။ လေးစားမှုနှင့်အတူ Lego တရားဝင်မှုကိုတည်ဆောက်ပါ၊ အုတ်ဗားရှင်းသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာကား၏တူညီသောခဲဖွယ်စားဖွယ်အဆင့်ကိုပုံတူကူးရန်ကြိုးစားရုန်းကန်ရသော်လည်းပုံသဏ္otherwiseာန်သည်အခြားပုံစံများကိုကျွမ်းကျင်စွာပြန်လည်ပြုပြင်ထားပြီးကျန်မော်ဒယ်လ်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။artမော်တော်ယာဉ်နောက်ဘက်ပြန်လည်တပ်ဆင်ခြင်းသည်အားစိုက်ထုတ်ခြင်းနှင့်အလွန်တိကျမှန်ကန်သောပတ် ၀ န်းကျင်ဖြစ်သည်။ အင်ဂျင်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမှတည်ဆောက်ထားသောဗဟိုအိပ်ဇောသည်ဤတွင်ထင်ရှားသောမီးမောင်းထိုးပြသည်။
သေးငယ်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလည်းပတ်ပတ်လည်မှာရှိပါတယ် ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko ၎င်းသည်မည်မျှရိုးရှင်းပြီးထိရောက်မှုရှိကြောင်းကိုလျစ်လျူရှု။ မရနိုင်ပါ။ နောက်ဘက်မီး၏ပုံသဏ္fromာန်မှသည်နောက်ကွယ်ရှိ windscreen ကိုဖြည့်ရန်အသုံးပြုသည့်စတစ်ကာများအထိပင် - ဤအရာအားလုံးသည်၎င်းအားချစ်စရာကောင်းသည့်အပန်းဖြေမှုဖြစ်စေရန်ကူညီခြင်းဖြစ်သည်။ မကြာမီ -to- ဖြစ် - အထင်ကရ hypercar.
ဒါကအလုပ်လုပ်ဘတ်ဂျက်အတွင်းနှင့် p ၏ကျယ်ပြန့အတွင်းပင်ကပြောသည်arts ကိုမှရရှိနိုင် Lego Speed Champions အသင်း၏အပြီးသတ်ဒီဇိုင်းတွင်အပေးအယူများရှိနေသည် ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jeskoအဓိကအားဖြင့်ကား၏နှစ်ဖက်စလုံးတွင်တွေ့ရသည်။ Jesko ရဲ့ bodywork မှာသိသိသာသာသိမ်မွေ့တဲ့လိုင်းတွေနဲ့ထောင့်အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးရှိတယ်။ တံခါးအားလုံးနီးပါးကိုတည်ဆောက်ခဲ့တယ် Lego ဒီဇိုင်းစံချိန်စံညွှန်းများအကြားရွေးချယ်မှုလုပ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ယခုပုံစံသည်တံခါး၏အရှေ့ဘက်မှနောက်ကျောဘီးခွေအထိဆက်လက်တည်မြဲနေသောထက်မြက်သောမျဉ်းကိုဆက်လက်မထားရှိခြင်း၊ ပုံစံတူညီသည့်တံခါးပြားများ၏အတိမ်အနက်နှင့်ထောင့်တို့ကိုမဖော်ပြထားသည့်ပုံစံတစ်ဝက်ရှိသောအိမ်တစ်လုံးကိုမော်ဒယ်လ်ကတွေ့ရှိသည်။ လေစီးဆင်းမှုကိုအားပေးဖို့။
ဤရွေ့ကားတစ် ဦး မဟုတ်ရင်ချစ်စရာကောင်းပထမ ဦး ဆုံးဆွဲဆောင်၏သော်လည်းအသေးစားဝေဖန်မှုများဖြစ်ကြသည် Lego Koenigsegg တည်ဆောက်။
ပါဝင်သည် ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko Koenigsegg အမှတ်တံဆိပ်ပြိုင်ပွဲဝတ်စုံများတွင်တစ်ခုတည်းသောအသေးစားပုံစံဖြစ်သည်။ Lego Speed Champions အသေးအဖွဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ခဲယဉ်းသော်လည်း၊ ဤအရာသည်eကိုပေါင်းထည့်ရန်ကောင်းမွန်ပြီးသီးသန့်ဒီဇိုင်းဖြစ်သည်xtra အစုံ။
အားလုံး - တစ်ခုတည်းကားရှစ်လုံး - အကျယ်နှင့်အတူ Lego Speed Champions အစုံ, ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 ၏ညှိ, အနည်းငယ်ပိုမိုမြင့်မားစျေးနှုန်းမှာလာပါတယ်။ မျက်နှာပေါ်မှာတန်ဖိုးထားနေစဉ်သင်၏အကောင်းဆုံးအသုံးပြုမှုကိုခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ Lego ဘတ်ဂျက်၊ Speed Champions အစုံစိတ်ပျက်မထားဘူး။
ဖြစ်လာခဲ့လျှင် ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko, ထိုကဲ့သို့သောရှုပ်ထွေးပြီးထူးခြားတဲ့ကားဒီဇိုင်းဤမျှလောက် sm ရှိပါတယ်ခဲ့artLy အုတ်ပုံစံဖမ်းမိ။ ကားရဲ့အကျွမ်းတဝင်အဖြူရောင်အဖြူရောင်အရောင်မျိုးစုံကိုလေ့လာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်မျက်လုံးရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခြင်းသည်ဒီအစုဟာဘယ်လောက်ကောင်းမွန်တယ်ဆိုတာကိုသက်သေပြခြင်းဖြစ်သည်။ စျေးသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ သို့သော်တန်ဖိုးသည်အတော်လေးနောက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကားတစ်စီးတည်းသာရှိသော်လည်းပိုမိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်များစွာရှိသည် Lego လက်သမား။
ငါတို့ ၆ နှစ်လောက်စောင့်ရမယ် Lego Koenigsegg လာဖို့လာပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲဒါကိုကောင်းကောင်းရခဲ့ပြီ။ အစစ်အမှန်ကမ္ဘာဟိုက်ပါကား၏အဓိကဖော်ထုတ်နိုင်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များသည်ဤအရာကိုကျွမ်းကျင်စွာဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည် Lego ပျော်စရာနှင့်ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့တည်ဆောက်ဘို့မော်ဒယ်နှင့်ပါစေ။ ဒါကရှစ်လုံးပါတဲ့ခေတ်ကာလမှာပါ Speed Champions ထို့အပြင်ဆီလျော်သည် - ၎င်းသည်လုံးခြောက်လုံးဖြင့်မည်သို့ကြည့်နိုင်သည်ကိုအနီးစပ်ဆုံးနှိုင်းယှဉ်မှုကို ၂၀၁၅ ခုနှစ်၏ 2015 McLaren P75909 တွင်တွေ့ရှိရခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၂၀၂၁ ချဉ်းကပ်မှုတွင်တန်ဖိုးထားစရာများစွာရှိသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ကျော်ကကြိုတင်ထုတ်လုပ်မှုတွင်ရောင်းချခဲ့သည့်အစစ်အမှန်ပစ္စည်းများ၏ ၁၂၅ စီးလုံးနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် Koenigsegg Jesko ကိုလည်းပိုင်ဆိုင်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်တွင်မကြာမီဖြစ်လာမည့်အမြန်ဆုံးကားကိုပရိသတ်များလုပ်နိုင်သည် ဒီမှာမှားနေပြီ Jesko နှင့် ပတ်သက်၍ ပျော်မွေ့ရန်နှင့်တန်ဖိုးထားရန်အရာအားလုံးကိုသိမ်းဆည်းထားသည် ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko ၎င်းသည်အပြည့်စုံဆုံး၊ အပြည့်စုံဆုံးဖြစ်မည်မဟုတ်သော်လည်း Speed Champions ကားတစ်စီးဖြစ်သော်လည်းတကယ့်ကမ္ဘာကား၏ထူးခြားသောဒီဇိုင်းနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုဖြစ်နိုင်သောအရာနှစ်ခုစလုံးကိုအံ့ fully စွာကိုင်တွယ်နိုင်ဆဲဖြစ်သည်။ Lego.
သောအလုပ်ကိုထောကျပံ့ Brick Fanatics သင့်ရဲ့ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်ပါဘူး Lego ငါတို့တ ဦး တည်းမှတဆင့် တွဲဖက်လင့်ခ်များ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
LEGO တည်ဆောက်ရန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ Speed Champions ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko?
အတူတူထားရန် 45 မိနစ်ခန့်ကြာပါတယ် ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jeskoပိုမိုရှုပ်ထွေးသောအဆင့်များစွာမှကျေးဇူးတင်ပါသည် Lego ကားတစ်စီး။
Lego ထဲမှာဘယ်လောက်အပိုင်းအစတွေရှိလဲ Speed Champions ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko?
၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko အငယ်ဆုံးပါပဲ Lego Speed Champions 2021 ကိုအပိုင်းပိုင်းမှာလာမယ့်, နွေရာသီ 280 လှိုင်းအတွက်ဖြန့်ချိထား။ လွှတ်ပေးသည့်အချိန်တွင်၎င်းသည်အခင်းဖြစ်ပွားရာမှရှစ်လုံးပါသည့်အသေးငယ်ဆုံးကားလည်းဖြစ်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကြီးလဲ Speed Champions ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko?
၂၀၂၁ နွေရာသီ၏တိုတောင်းသောကားများအနက် Lego Speed Champions မျဉ်းကြောင်း, ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko အလျား ၁၆ စင်တီမီတာ၊ အကျယ် ၇.၅ စင်တီမီတာနှင့် ၄.၅ စင်တီမီတာရှည်သည်။
Lego ဘယ်လောက်ကျပါသလဲ Speed Champions 76900 Koenigsegg Jesko ကုန်ကျသလား
အစစ်အမှန်အရာထက်ဝေးလျော့နည်း။ £ 17.99 / $ 19.99 / € 19.99 တစ်ခုတည်းအတွက်စျေးကြီးပုံရသည် Lego ကားရှိပေမယ့်တန်ဖိုးတွေအများကြီးရှိတယ် ၇၆၉၀၀ Koenigsegg Jesko။ ဒါ့အပြင်ဒါဟာကားအစစ်အမှန်ကားရဲ့လမ်းထက်ဈေးချိုပါတယ်artန်းကျင် $ 3m ၏စျေးနှုန်း ing ။
← LEGO ဟယ်ရီပေါ်တာအနှစ် ၂၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တစ်ခုနောက်ကျခဲ့ပါသလား။
Lego Creator Expert 10292 အဆိုပါ Friends Apartပြန်လည်သုံးသပ်ချက် →